musha / Blog / Zvekuita Kana uchitenga Iyo Kicheni Faucet
2020 / 11 / 02 kupatsanuraBlog 2135 0
Iwe unofanirwa here kuwana yakanakisa mhando kicheni pombi? Zvakanaka, kana iwe uchitsvaga kuti uwane yakasarudzika sarudzo, ipapo uchafanirwa kutanga yako tsvagiridzo uye upfuure nezve izvo izvo izvo zvinokutendera iwe kuti uwane chaunoda mhedzisiro. Ita shuwa kuti urikusarudza yakanakisa mhando kicheni pombi saka haufanirwe kusangana nematambudziko gare gare. Iyo nzira kwayo yekuenderera kuitira kuti ugone kudzivirira matambudziko ese auri kutarisana nawo. Nekutarisa pazvinhu zvinonyanya kukosha, iwe unozogona kuwana chaunoda mhedzisiro.
Zvinogara zvichidikanwa kuti iwe usarudze yakanakisa chigadzirwa kuti usasangana nematambudziko gare gare. Tichave tichikurukura zvese zvakakosha zvinhu zvaunofanirwa kutarisa pazviri kuti iwe ugone kubata zvinhu nenzira kwayo. Ngatitarisei kuti ungaita sei kuti zvinhu zvive nyore uye zvirinani kwauri.
Tarisa Chigadzirwa Chakavimbika
Chekutanga pane zvese, iwe uchafanirwa kutsvaga chakavimbika chigadzirwa. Kana usiri kutsvaga chigadzirwa chakavimbika, saka haugone kuwana mhedzisiro yaunoda. Ita shuwa kuti iwe uri kutarisa zvinhu zvakadzama kuitira kuti iwe ugone kubata zvinhu nenzira kwayo nzira. Nekutarisa pane yega yega dhata iyo inonyanya kukosha, iwe unozogona kuwana chaunoda mhedzisiro. Iyo chaiyo nzira yekuenderera mberi kuti ugone kubata zvinhu nenzira kwayo. Ita shuwa kuti urikutsvaga kuvimbika kana uchisarudza bheseni pombi yekugezera yekicheni yako.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo chauchazofanira kutarisa nezvacho kutsvaga kugona. Kana usiri kutarisa kugona, ipapo unozopedzisira wasangana nematambudziko mazhinji. Ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zvaunoda kutarisa kuti ugone kudzivirira matambudziko ese auri kutarisana nawo. Ita shuwa kuti urikutarisa kukwanisika kuti ugone kuwana mhinduro hombe uye utenge pombi yekugezera yekutengesa.
Tarisa Chigadzirwa Ratings
Chinhu chinotevera icho iwe chauchazofanira kutarisa nezvacho kutarisa chigadzirwa ratings. Kana iwe usina chokwadi chekuti ungawana sei bheseni matepi anonyudza mapombi, saka iwe unofanirwa kugara uchiongorora ratings yechigadzirwa kuti ugone kuita kuti zvinhu zvive nyore uye zvirinani kwauri. Izvi ndizvo zvinhu zvaunofanira kutarisa paunenge uchitenga pombi yemukicheni.
Pakapfuura :: 2020 US Bathroom Trends Chirevo: Smart Zvimbuzi, Sensor Faucets, Uye Tsika Yekugezera Makabati Ari Kuenda Kuve Anofarirwa! Zvadaro: Zvinhu Zvishanu Zvinoita Iyo Yakakura Kicheni Faucet